एमाले महासचिव पोखरेल भन्छन्, ‘ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्ने सहमति भएको छैन र हुँदैन’-Nepali online news portal
एमाले महासचिव पोखरेल भन्छन्, ‘ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्ने सहमति भएको छैन र हुँदैन’
पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रम र एमाले माओवादीबिचको पार्टी एकता प्रक्रियाका बारेमा पत्रकार ऋषि धमलाले एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि लिइएको अन्तरवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा एमाले तयार भएको हो ?
आवश्यकता र औचित्यले जे पुष्टी गर्छ त्यही गर्ने हो । हामी एकताको कुरा गरिरहँदा माओवादी केन्द्र र एमाले भएर सोच्नु जरुरी छैन । नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी बनिसकेपछि कुन पद कसलाई दिदा उचित हुन्छ भन्ने कुरा छलफलबाट टुङयाउछौँ ।
प्रचण्डले त प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा पद आफूले लिनुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ नि ?
प्रचण्डजस्तो मान्छेले त्यति हल्का रुपले कुरा गर्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वास नै गर्दिन । तर कम्युनिष्ट पार्टीभित्र मल्टी सेन्टर सृजना गर्ने ढंगले अभ्यास गरियो भने परिस्थिती गम्भीर हुन सक्छ । त्यसैले मल्टी सेन्टर वा युनी सेन्टर गरेर अवधि तोकेर जाने भन्ने दुईवटा अभ्यास छन् । तर पोजिसन बनाएर जानु हुँदैन । हाम्रो लक्ष्य नै एउटै पार्टी बनाउने हो ।
नेतृत्व पनि चाहिन्छ नि । नेताहरुको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ला ?
मुख्य कुरा जुन लक्ष्य तय गरेका छौँ, त्यो पूरा गर्नका लागि के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । को नेतालाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा त कार्यविभाजनको कुरा हो ।
ओली र प्रचण्ड दुवैलाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी एकता गर्न लागिएको हो ?
एउटा पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष कसरी हुन्छ ।
यस विषयमा पनि छलफल भएको भन्ने कुरा आएको थियो नि ?
हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेका छैनौँ । तर एउटा समान्य कुरा एउटा पार्टीको दुई जना अध्यक्ष कसरी हुन्छ ?
त्यसोभए ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै हुने हो ?
ओली अहिले अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ । बाँकी कुरा त कार्यदलले छलफल गरेर सुझाब दिन्छ । पार्टी एकता संयोजन समितिले अन्तिम निर्णय गर्छ ।
एकतापछि कस्तो नीति र सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ ? माओवाद र बहुदलीय जनवादको कुरा कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
बहुदलीय जनवाद भनेको एमालेको पेवा हो । एकताको कुरा गर्दा एमालेसँग मात्रै गाँसिएको त्यो विषय छोड्नुपर्छ भन्ने ढंगले कसैले कुरा गर्नु उचित हुँदैन । बहुदलीय जनवाद भनेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र माक्र्सवाद लोलिनवादलाई लागु गर्दाको माक्र्सवाद हो । त्यसैले यो पार्टी विशेषको सिद्धात होइन । बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तले नै हामीलाई निर्देश गरेको छ । आगामी दिनमा पनि बहुदलीय जनवादका अन्तरतत्वलाई छोड्न सक्दैनौँ ।